घरबेटी काण्ड: भाडामा बस्नेलाई घरबेटीले कुट्न आएपछी बुबाआमा भागाभाग, फोन गर्दा आयो ज्यान मार्ने धम्कि – Sanjal Nepal
Homeसमाचारघरबेटी काण्ड: भाडामा बस्नेलाई घरबेटीले कुट्न आएपछी बुबाआमा भागाभाग, फोन गर्दा आयो ज्यान मार्ने धम्कि
घरबेटी काण्ड: भाडामा बस्नेलाई घरबेटीले कुट्न आएपछी बुबाआमा भागाभाग, फोन गर्दा आयो ज्यान मार्ने धम्कि
November 25, 2020 admin समाचार 4176
एजेन्सी । चर्चित गायक कुमार सानुले छोरा जान कुमारसंग २७ वर्ष देखि भेटेका छैनन् । जान कुमार बिग बोश कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सो कार्यक्रममा उनलाई अर्का प्रतियोगिले नातावादको विषय उठाएका थिए । बुवा कुमार सानुका कारण उनले बिगवोशमा आउने अवसर पाएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनको त्यस्तो टिप्पणीमा कार्यक्रम सञ्चालक सलमान खानले पनि टिप्पणी गरेका थिए ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हालै जान कुमारले बुवासंग २७ वर्ष देखि भेट नहुनुको कारण खुलाएका छन् । उनले भनेका छन्, बुबा देशका चर्चित गायक भए पनि उहाँ आफ्नो छोरालाई २७ वर्ष देखि भेट्नुभएको छैन । आज हामी जे छौं हामी आमा रीताको कारणले हो ।
रिता र कुमार सानुको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । तर तीन सन्तानको जिम्मेवारी रिताले लिएकी हुन् । उनीहरु आमासंगै बस्छन् । उनले भनेका छन्, हामी तीन जना भाइ छौं। आमा रीता भट्टाचार्यले हामी तीन जनालाई एक्लै हुर्काउनुभयो। मेरो बुबा मेरो जीवनको हिस्सा हुनुहुन्न। मलाई थाहा छैन किन उहाँले मलाई कहिल्यै समर्थन गर्नुभएन वा मलाई प्रमोट गर्नुभएन ।
तपाईहरुले बुवालाई नै सोध्न सक्नुहुनेछ । कलाकारीतामा धेरै कलाकारहरु छन् जसले सम्बन्धविच्छेद गरे र दोस्रो विवाह गरे। उनीहरूले पहिलो श्रीमतिसंग कुनै सम्बन्ध नराखेपनि छोराछोरीको भने पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छन् । आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
ुतर हाम्रो त्यस्तो अवस्था होइन । मेरो बुबा कुमार सानुले हामीसँग कुनै सम्पर्क राख्नुभएन। केही समय अघि उहाँले मेरो बाल्यकालको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । मलाईइ लाग्यो बुवाको मन पग्लियो । उहाँले फेरी मेरो कामलाई समर्थन गर्दै अर्को भिडियो पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । बुवा परिवर्तन हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर त्यस पछि हाँसंग हाम्रो सम्पर्क छैन ।
ुमलाई पनि लाग्छ कि आफ्ना बच्चाहरूप्रति बुबाको रिस यति लामो समयसम्म हुँदैन । पार्टनरसँग मतभेद हुन सक्छ, तर सबै जोडीहरूले आफ्ना बच्चाहरूले यसको परिणाम भोग्नुपर्नेछ भनेर कहिले सोचेका थिएनन्। यसैले गर्दा मलाई अनौठो लाग्छ जब मानिसहरूले मलाई नातावादको कुरा गर्छन । मैले आफ्नै मेहनतले आफ्नो स्थान बनाएको छु र भविष्यमा पनि जारी राख्नेछु ।
५ जना छोराछोरीकी आमा मध्यरातमा फरार भएपछि परिवारमा बिचल्ली भिडियो हेर्नुहोस !
भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा भेटियो !
November 26, 2020 admin समाचार 1744
काठमाडौं । स्वर्ण कछुवालाई नेपालमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुले भगवान विष्णुको रुपमा मान्छन् । भगवान विष्णुको अवतारहरु मध्य एउटा कछुवाको अवतार पनि भएको धार्मीक मान्यता छ । त्यो कछुवा स्वर्ण कछुवा हो । भगवान विष्णुको अवतारका
November 25, 2020 admin समाचार 2573
अमेरिकाको एक स्कुलमा ६ वर्षकी छोरीलाई लिन पुगेका एक पिताको चर्चा अत्याधिक बढेको छ । मानिसहरु उनलाई एक आदर्श पिताको रुपमा चित्रण गर्दै उनको प्रशंशा गरिरहेका छन् । ती ६ वर्षकी बालिकाले एक दिन स्कुल
हार्दिक श्रद्धाञ्जली #RIP ?? टिकटक बनाउने क्रममा पुलबाट खसेर ग’म्भीर घाइते भएका रमेश थापाको मृत्यु
December 22, 2020 admin समाचार 1663
टिकटक बनाउने क्रममा पुलबाट खसेर ग’म्भीर घाइते भएका रमेश थापाको मृत्यु दाङ : दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पुरन्धारा छहरा नजिकमा रहेको झुलुंगे पुलमा टिकटक बनाउने क्रममापुलबाट खसेर गम्भीर घाइते युवकको उपचारको क्रममा मृत्यु
LEX 18 agenda conversation: Job club (486360)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458467)
Hello world! (384473)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351981)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (121800)